Etu otu ndi otu okike wuru otu ihe nlere iji gosiputa uru ha bara na C-Suite | Martech Zone
Ihe okike okike di elu di nkpa nye ahia dijitalụ. Ọ bụ mmanụ ọkụ maka ịzụ ahịa akpaaka, mgbasa ozi dijitalụ, na mgbasa ozi mmekọrịta. Agbanyeghị, n'agbanyeghị oke ọrụ ọdịnaya okike na-arụ, ịnweta ụlọ ọrụ nwere mmasị na ọrụ na-aga n'ime ọ bụ ihe ịma aka. Fọdụ ndị ndu na-ahụ mkpirisi mbụ, ma ọtụtụ na-ahụ nsonaazụ ya, mana ole na ole maara ihe na-eme n'etiti.
Enwere ọtụtụ ihe na-aga n'azụ ọnọdụ: ịhazi ọrụ, ịkwado ihe ndị eji eme ihe, ozi ịntanetị na-aga n'ihu, ihe ndị na-emegiderịta onwe ha, mgbanwe ịmepụta, ndetu iji detuo, nzaghachi-ịchụso, na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. Kwa afọ nyocha obosara nke ulo oru na ubiMotionNow na-egosi mgbe niile na ndị okike na-etinye ihe dị ka pasent 20 nke oge ha na ọrụ nchịkwa.
Mgbe ndị okike na-arụsi ọrụ ike na ọrụ nhazi, ha enweghị ohere ha chọrọ iji lekwasị anya na mmanụ ọkụ ahịa azụmaahịa chọrọ. N'ihi ya, ọrụ ahụ na-agbakọta ma nrụgide na-etolite. N'ezie, olu oru ngo, ọsọ nke oge agba, na ụdị dijitalụ di iche-iche anọgidewo na isi nsogbu ise chere ndi okike aka maka afọ atọ gara aga.
Iji belata nrụgide ahụ, ndị isi okike na-arịọ maka mmefu ego ma ọ bụ akụrụngwa ma na-enwe nguzogide na-enweghị isi Nsogbu dị okpukpu abụọ: anyị maara na ndị isi ndị okenye enweghị visibiliti n'ime ọrụ achọrọ iji mepụta ezigbo okike - mana ndị okike na-agbasi mbọ ike iji gosipụta uru n'asụsụ azụmaahịa ahụ ghọtara.
Ọ bụ ya mere obibia Cherise Oleson, onye isi okike ihe okike na Ike Franklin, were dị nnọọ irè. Ọ jụrụ ndị isi ya ihe metrics ka ha chere bara uru. Mgbe ahụ, ọ chọtara ụzọ iji dọpụta data ahụ na sistemụ njikwa ọrụ otu ahụ ma gosipụta akara akara okike.
Anyị maara ma ọ bụrụ na anyị azụta ha na ha ga-enwe mmasị ịhụ usoro ndị ahụ mgbe anyị gosipụtara ha. Ọ dị mfe nghọta na igwu ozi na ụzọ a na-ahụ anya.
Cherise Oleson, Adobe MAX Nzukọ
Isii Creative Metrics ahụ C-Sures Na-eche Banyere
A na-emelite akara akara ahụ kwa ọnwa ma nwee isi ihe isii. Usoro ndị a na-egosipụta ọnọdụ nke ihe dịka ọrụ 1,600 okike ndị otu ya mezuru kwa afọ. Usoro isii ndị a na-eso n'okpuru.
Metric 1: Onu ogugu ihe omumu ugbu a na-aga n'ihu
A na-egosipụta metric a dị ka eserese nke na-egosi ọnụọgụ nke ọrụ mmeghe na ọnọdụ nke ọrụ ahụ ugbu a. Iji maa atụ, ọrụ nwere ike ịdabere na kickoff, maka nyocha ma ọ bụ jiri onye mmebe mezue ma mechie. Ọnụọgụ ahụ na-egosi olu ọrụ na ọkwa nke na-egosipụta nsogbu dị iche iche.
Metric 2: Onu ogugu nke ihe oru emechala ka o doo anya (YTD)
N'ebe a, otu a na - ewepu onu ogugu oru ngo mejuputara n'ime uzo ato:
ndị dechara na ọkọlọtọ oge
ndị ahụ bụ ngwa ngwa
ndị ahụ rịọrọ ka ha bụrụ bugara
Emewo ngwa ngwa oru ngo bu ngwangwa mgbanwe di na oru ndi adighi acho otutu oru imewe. Dịka ọmụmaatụ, ịhazigharị ihe osise ma ọ bụ ịgbanye logos na ọkọlọtọ bụ ọrụ dị mfe enwere ike ịgbanye ngwa ngwa.
Na-agba ọsọ oru ngo bu arịrịọ nwere oge ngwangwa. Nke a bụ akụkụ dị mkpa: Ndị otu Cherise kpebiri ọkara ma ọ bụ ọkọlọtọ ihe okike na-ewe ụbọchị 30 iji wuchaa site na mmalite malite. Ya mere, mkpebi ịkesa oru ngo dị ka "ọsọ ọsọ" bụ data-chụpụrụ.
Metric 3: Projects with The N'atu Kachasị Elu Of Nyocha YTD
Nke a bụ ndepụta 10 kachasị elu na ọ nweghị onye ụlọ ọrụ chọrọ ịpụta. O gosiputara oru ndi choro ihe nlere anya. Nkwekorita ọrụ nke ọrụ (SLA) ndị otu okike nwere ndị nwere ihe na-enye usoro nlele atọ. Dika akara aka, 2020 In-House Creative Management Report kwuru na pacenti iri ato na ato nke oru okike choro nyocha ise ma obu pere mpe.
Kedu otu ụkpụrụ a si enyere ndị ndu aka? Nke a bụ ezigbo ihe atụ: otu ọrụ dị na ndepụta chọrọ nyocha dị ịtụnanya nke usoro iri abụọ na asatọ, nke karịrị akarị. Nke ahụ na-achịkwa oge otu ndị okike - na-efu ndị ọzọ metụtara ya. Ihe data a na - ewepu okwu a - ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ bụ ngalaba ọ bụla ma ọ bụ ndị na - etinye aka na - esite na ya - ndị ndu ga - ahụ ya, hazie ya ma dozie ya.
Metric 4: Nkezi Aka-Na-emepụta Oge Ebumnuche Chọrọ
Dị ka aha ahụ na-egosi, nke a na-egosi oge ole - atụpụtara na ụbọchị - na ndị na-ese ihe na-eji oge okike arụ ọrụ. Ọ bụ ọnụọgụ dị mma ịnwe ugbu a, mana ọ kacha enye aka ịchụso oge. Dịka ọmụmaatụ, mgbe Franklin Energy na-atụnyere metric a kwa afọ, ọ nwere ike igosipụta na ọ belatara oge nhazi oge aka chọrọ.
Metric 5: Nkezi Onu ogugu Projects Per Team Member
Nke a na-egosi ngụkọta nke oru ngo dechara ekewa site na ọnụ ọgụgụ nke ndị so na otu ihe. N'ebe a, uru ahụ na-egosi n'ezie na atụnyere ọtụtụ afọ. Franklin Energy nwere ike igosi na otu ndi okike na-emecha ihe onu ogugu oru - obuna dika oge ntinye aka.
Metric 6: Nkezi oge ọ na-ewe iji wuchaa ọrụ okike.
Mkpụrụ ikpeazụ bụ oge nkezi ọ ga-ewe iji rụchaa ọrụ. Nke a bụ otu metrik nke na-eme ka nkwụsị dị n'etiti ọkọlọtọ, esoro ọsọ ọsọ, na bugara oru ngo. Mgbe ahụ, ọ ga - aga n’ihu ma jiri oge dị iche iche wee mezue nke ọ bụla n’ime ndị ahụ na oge ọrụ ndị a ejiri nyocha
Ihe nke a na-egosi ndị isi bụ ọtụtụ oge ihe okike na-ewe iji mezue dabere na oge ndị nketa oke ga-enyocha. Nke a na-enweta ndị isi iji mesie mkpa ọ dị maka ụlọ ọrụ iji nyochaa ọrụ ngwa ngwa ma mee ka ihe na-agagharị.
Iwulite Ntụkwasị Obi Na Ntụkwasị Obi Site na Data
Imirikiti ndị isi ahịa na-anabata ahịa ahụ dabere na ihe okike. Agbanyeghị, ịghọta ihe ọ na-ewe iji weta okike na ndụ mgbe ụfọdụ na-adị m ka ọ dị mma. Ihe okike imepụta ihe na-akọwapụta ọrụ ọrụ siri ike na-emepụta n'ime ọrụ. N’aka nke ya, nke ahụ na - ewulite ntụkwasị obi, ntụkwasị obi, ma na - ewusi mmekọrịta dị n’etiti okike na ire ahịa - nke ahụ na - ebute nsonaazụ azụmaahịa kacha mma.
Tags: adobe max Conferencecherị olesonokikeihe eji eme iheihe okikeìgwè ndị okikedashboardisi akaraFranklin ikeamaghị nke ọmadashboard ahiaakara ahịaoru ngoakarangụkọta orungụkọta oru agwụlangụkọta oru enyocha